ဘယ် Programming ကိုလေ့လာသင့်လည်း - MYSTERY ZILLION
ဘယ် Programming ကိုလေ့လာသင့်လည်း
March 2014 in Programming
လောလောဆယ်တော့ C++ လေ့လာနေပါတယ်။
အဲဒါပြီးရင် C# ပဲလေ့လာရမလား
March 2014 edited March 2014 Administrators
both are good. Which path do you want to go ?
C# is good for ASP.NET and windows app
Java is good for multi platform application. For android app , you need to know Java.
But with UI is not easy like C# with Visual Studio.
For web, .NET support ASP.NET with C#. You can use J2EE with any framework that you like. Example : spring , struts , play , etc.
Thanked by2Two_face nekonobu
ဘယ်ဟာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ကောင်းပါတယ် ဒါပေမယ့် ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် ရောက်တဲ့အထိတော့ ကြိုးစားမှရမယ် မဟုတ်ရင်တော့ သုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။
C++ ကိုသေသေချာချာ တတ်ဖို့ အချိန်ကြာ ကြာလေ့လာရပါလိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို လဲ ဆိုတော့ C++ ဟာ တော်တော် ကြီးကြယ်မြားပြားတဲ့ Programming Language ဖြစ်လို့ပါပဲ။
ကျွန်တော် C++ ကို ကျောင်းတုန်းက လေ့လာ ခဲ့ပါတယ်။ အခု မသုံးတာကြာ တော့မေ့ ကုံပါပြီ။ Languague တစ်ခု ကိုလေ့လာရုံ သက်သက် မလေ့လာစေချင်ပါဘူး။ အသုံးပြုဖို့ အတွက်လေ့ လာစေချင်ပါတယ်။
လေ့လာလို့ တက်လာတာနဲ့ တပြိုင်နက် တခုခု ဖန်တီး တည်ဆောက် ကြည့်ပါ။ ဖန်တီး တည်ဆောက် နေစဲမှာ အခက် အခဲ ကျုံပါက စာအုပ် ကို ကိုးကား ပါ။ အဲဒါမှ တစ် နေသေး တယ်စိုရင် Internet မှာ အဖြေ ရှာပါ။ Internet မှာ stackoverflow.com တို့လိုနေရာမျိုးမှာ မြားသော အားဖြင့် အဖြေရှိတတ်ပါတယ်။ မတွေ့လျှင် သင့်မေးခွန်းကို အဲဒီမှာ post လုပ်လိုက်ပါ။ English လို နားလယ်အောင် ဖတ်တတ်ပါစေ။ ရေးလဲရေး တက် ပါစေ။ Programming မှာ တစ်နေ လို့ Internet မှာ အဖြေရှာ တဲ့အ ခါ English လို ရေးတတ် ဖတ်တတ်တာ အင်မတန် အသုံးဝင်ပါ တယ်။
C++ ပြီးရင် C# လား Java လား နဲ့ ပတ်သတ်လို့ ကို saturngod ပြောထားတာ ထဲထည့်စွက်ပြောချင်တာကတော့ နှစ်ခုလုန်း ဟာ Syntax အရ C++ နဲ့ စင်တူပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ သုံးခုစလုံး ရဲ့ Ecosystem ဟာ အရမ်းကွဲပြားပါတယ်။ C++ ကို firmware တွေ device drivers တွေ ရေးတဲ့ အခါ အသုံးမြားပါတယ်။ C/C++ program တွေရဲ့ speed က အရန်းမြန် လို့ပါပဲ။ C# နဲ့ Java တို့ ဟာ C/C++ လောက် မမြန်ပေမဲ့ တော် တော် တော့မြန်ပါတယ်။ C# နဲ့ Java ကို US က company ကြီး တွေမှာ Enterprise software ရေး တဲ့ အခါမှာ အသုံးမြားပါတယ်။ တချို့ က Java သုံး ပြီး တချို့ က C# သုံး ပါတယ်။ C# ကို Windows environment မှာပဲ အသုံးမြားပြီး Java ကိုတော့ Windows၊ Mac၊ Linux ကြိုက် တဲ့ နေရာမှာ သုံးလို့ရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကို saturngod ပြောထားသလို cross platform app တွေ Android app တွေရေးတဲ့ အခါ Java ကို သုံးကြပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် US မှာ Java အလုပ်အကိုင် တွေတော်တော်ပေါမြား ပါတယ်။ C# အလုပ်အကိုင် တွေလဲ မြားတော့မြား ပါတယ်။ Java လောက်တော့ မမြားပါ။ ရှင်ကြည့်လို ပါက http://www.indeed.com/jobtrends?q=C++,Java,C#&amp;l=
April 2014 Registered Users
If you want to do console programs, I think you'd start with C. C is the basic of all programming languages. Many console programs are written with C. If you get C, it will be an easy way to learn different kinds of languages. C++ is also an evolution of C language, also C# and Objective C. It is not very difficult for you who's having knowledge of C++, to study C. I'm alsoabeginner of IT job field and possess not much experience. I only told you what my leader told me to do. With regards..... :P
Programming မှာအခြေခံဆိုတာ Programming Language မဟုတ်ဘူး ways of thinking as how computers are working လို့ပြောမှရမယ် အဲဒါကိုစဉ်းစားတတ်ရင် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သုံးလို့ရပါတယ် Programming Languages တွေကို Syntax ဆင်လို့ ပြောင်းလေ့လာရ လွယ်တယ်လို့ပြောတာ အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး Syntax ဆိုတာက အလွယ်ဆုံးအရာပဲ ဘယ်လောက်ကွဲပြားကွဲပြား ချက်ချင်းပြောင်းလို့ရတယ်။ အခုခေတ်မှာ Programming Language တခုကို အကျိုးရှိရှိဘယ်လောက် အသုံးချနိုင်လဲဆိုတာက သုံးနေတဲ့ Language မှာပါတဲ့ Application Library တွေကို ဘယ်လောက် သိလဲဆိုတာရယ် အံဝင်အောင် အသုံးချနိုင်လဲက ပိုအရေးပါလာတယ် Syntax ဆင်တဲ့အတွက် လွယ်တယ်လို့ယူဆလို့ ရနိုင်တဲ့ခေတ် မဟုတ်တော့ဘူးဆိုရမယ်။ အကယ်လို့ အခုအချိန်မှာ C, C++ လေ့လာပြီးလို့ C#, Objective C, Java ကို လွယ်လွယ်ကူကူ ပြောင်းလို့ရမယ်လို့ ဆိုလာရင်တော့ စမ်းကြည့်လို့ပဲ ဖြေရပါလိမ့်မယ် အချိန်အတိုင်းအတာ တခုအထိမရောက်ပဲနဲ့ အသုံးချနိုင်တဲ့အချိန် မရောက်ပါဘူး ဘယ်လောက် လေ့လာချိန်ကြာမလဲကလည်း အြခားသော Fundamental Skill တွေကပိုမူတည်ပြီးတော့ အချိန်အတိုအရှည်ကွာနိုင်တယ်။